Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo meel fagaare ah lagu arkay | Jowhar Somali news Leader
Home News Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo meel fagaare ah lagu arkay
Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo meel fagaare ah lagu arkay
Wararka ka imanaya dalka Waqooyiga Kuuriya ayaa sheegaya in hoggaamiyaha dalkaas Kim Jong-Un meel fagaare ah lagu arkay kadib markii maalmihii la soo dhaafay ay soo baxayeen warar sheegaya in uu xanuunsan yahay.
Munaasabad loogaga hadlayay arrimaha cudurka Coronaha ayuu qudbad ka jeediyay Madaxweyne Kim isagoo cabaya sigaar.
Dhowaan ayaa la sheegay in caafimaadkiisu uu xun yahay uuna koomo ku jiro balse warkaas ayaa haatan noqday mid been ah.
Hase yeeshee Hogaamiye Kim ayaan u muuqan inuu hayo xanuun halis ah kadib markii uu maanta ka qudbadeeyay meel fagaare ah.
Mr Kim oo ka hadlayay kulan ka dhacay olitburo ayuu ka sheegay in laga gaabiyay dadaalladii ka hortagga fayraska Corona ee Kuuriyada Waqooyi laga waday. Sida ay soo werisay warbaahinta qaranka iyada oo aan bixin faah-faahin dheeraad ah.
Wadanka Kuuriyada Waqooyi ayaanan ilaa haatan laga xaqiijin kiis fayraska Corona ah, waxaana la aaminsan yahay in haddii uu gaaro xanuunka uu si xowli ah ugu faafayo ,uuna saameyn weyn ku yeelan doono dalkaasi aanu dhaqaalihiisa cagaha badan ku taagneyn.